Akụkọ - Ọhụrụ ụgbọ ala Europe na-ebili site na 1.1% kwa afọ na Septemba: ACEA
Ndebanye aha ụgbọ ala Europe bilitere ntakịrị na Septemba, mmụba mbụ nke afọ a, data ụlọ ọrụ gosipụtara na Fraịdee, na-atụ aro mgbake na mpaghara ụgbọ ala na ụfọdụ ahịa Europe ebe ọrịa coronavirus dị ala.
Na Septemba, ndebanye aha ụgbọ ala ọhụrụ bidoro site na 1.1% kwa afọ ruo nde 1.3 nde na European Union,
Mba Britain na European Free Trade Association (EFTA), ọnụ ọgụgụ sitere na European Automobile Manufacturers 'Association (ACEA) gosipụtara.
Otú ọ dị, ahịa ise kasị ukwuu na Europe bipụtara nsonaazụ dị iche. Spain, United Kingdom na France kọrọ akụkọ mfu, ebe ndebanye aha bilitere na Italy na Germany, data ahụ gosiri.
Volkswagen Group's na Renault sales ritere site na 14.1% na 8.1% na Septemba n’otu n’otu, ebe PSA Group kwuru na ọpụrụ nke 14.1%.
Ndị na-emepụta okomoko kpalitere ọghọm na Septemba na ahịa BMW dara 11.9% na ịma ọkwa Daimler nke 7.7% dobe.
N’ọnwa itoolu mbụ nke afọ, ahịa ritere site na 29.3% dịka mkpọchi coronavirus mere ka ndị na-eme ụgbọ ala mechie ụlọ ngosi na Europe dum.
A na-etinye ihe na-awụ akpata oyi n'ahụ n'etiti ụgbọ ala na taya ahụ, yana isi iyi. Elasticity nke mmiri mmiri na-awụ akpata oyi n'ahụ site n'okporo ụzọ, agbanyeghị, ọ na-eme ka ụgbọala maa jijiji n'ihi njirimara ike ya. Akụkụ na-eje ozi na keguru mmiri na-atụ ụjọ na-ezo dị ka a "ujo absorber", na viscous eguzogide ike na-ezo dị ka "damping ike".
Shock absorbers bụ ngwaahịa dị oke egwu nke na-ekpebi njirimara ụgbọ ala, ọ bụghị naanị site na mma ogo ịnya ụgbọ kamakwa site na ịrụ ọrụ iji chịkwaa mmụọ na nkwụsi ike nke ụgbọ ahụ.
Post oge: Ọkt-20-2020
Hood Shock Absorber, Ogige Ulo, N'iru n'iru Knuckle, Taya Ball Joint, Shock Absorber Rubber, Shock Absorber kpọchie,